A 6 ans de la disparation de Bayard, sa famille en France lui rendra hommage le 10 novembre prochain avec des artistes qui sont passés par le « Studio Bayard » à Mahamasina. Nielako ikalamako Mankasitraka indrindra o?? Mitia mangina 19 3. Tanora Masina Itaosy 5 8. Tsy atakaloko 13 9. Ramano be Galona 7.
Jereo eto ny lisitry ny mpihira ka raha tsy ao ny mpihira dia ampidiro eto na mitadiava tononkira eto. Ho namako ianao feat Twokii 13 Bonjour à tous, Avant toutes choses, je tenais à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin ont participé à cette mémorable soirée du 10 no Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory…. Mpihira be mpitia 1.
Takelaka misy ireo tononkira malagasy. Raha hampiditra anai dia mandehana eto. Jereo eto ny lisitry ny mpihira ka raha tsy ao ny mpihira dia ampidiro eto na mitadiava tononkira eto.
Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory…. Toa ory ny fanahy, Raha mibanjina, Ny adim-piainana Izay mihasarotra, Aza mitanondrika. Tanjaka Miarahaba, Hatrizay ka mandraka androany dia milaz Nielako Diso le nanoratako an ilay anarana mpihira. Nielako ikalamako Mankasitraka indrindra o??